Chii chiri dambudziko re nitrogen, nei varimi vachinyunyuta uye nei kudzora kuchikurumidza? : Martin Vrijland
Chii chiri dambudziko re nitrogen, nei varimi vachinyunyuta uye nei kudzora kuchikurumidza?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa7 November 2019	• 11 Comments
Zvinoita kunge denda chairo! Varimi vese vanongoerekana voda kuderedza nitrogen. Iro izwi 'nitrogen' rinotova neshoko rekuti 'kukwana' mukati uye nekudaro rinoita kuti murume wepakati ari mumugwagwa afunge kuti tiri kubata nechinhu chatiri kuzorovera pamusoro pacho. Zvichida vazhinji vanobatanidza izwi ne CO2 uye mutsauko hauzivikanwe. Nitrogen ndeyekutanga chinhu chechisikwa muzvisikwa. Izwi rekuti 'nitrogen' saka rinoreva atomu iyo inogona kungoitika mumhando se fomu yakasungwa (semoyo wemorekuru). Ndokusaka, semurimi, haugone kuderedza nitrogen. Iwe unogona, semuenzaniso, kuderedza ammonia. Amonia NH₃ inokwanisika kuyerwa uye inowanikwa, semuenzaniso, mune yekuchera mombe. Kuti iyo nyika inoda kuita chimwe chinhu nezvekudzikisa nitrogen zviri pachena chisarudzo cheNLP (Neuro Linguistic Programming) yekutamba vanhu vari pazinga repasi. Kuderedzwa kweNitrogen chaiko hakureve chinhu zvachose. Chii chaunoderedza nitrogen gasi, amoniya of chimwe chezvinhu zvakawanda mune iyo element nitrogen inoitika?
Iwe unogona kunge uchiziva nitrogen zvakanyanya kubva kuchinhu icho icho chiri pasi pekumanikidzwa kwakanyanya mubhodhoro uye unofanirwa kuidurura kunze neyakavharwa magirovhosi (kana semufananidzo kubva mubhodhoro rakaiswa), nekuti zvikasadaro minwe yako ichasunungura: nitrogen gasi (N2). Izvi zvinoshandiswa semuenzaniso kubvisa warts. Pangangoita nitrogen kubuda mubhodhoro redzvinyiriro, inotanga kuyerera nekuputika. Iyo ine inodziya tembiricha yekudziya -195,8 ° C uye ndiko kupisa uko nitrogen iri mumvura. Nitrogen gasi saka inotonhora chaizvo uye pakarepo inotanga kubuda mumhepo yakavhurika. Kuichengeta iri pasi pekumanikidzwa kwakasimba mumabhodhoro esimbi akasimba kunoita kuti iite mvura. Ndiwo mutemo wepanyama.
Isu taitoziva kuti taifanira kudzikisa CO2. CO2 haina chekuita ne nitrogen gasi (N2). CO2 zvinoreva kabhoni diamoni. Saka iro izwi rakarongedzwa seizvi: di-oxide inomiririra 2x oxygen. Atomu kabhoni rine maatomu maviri eokisijeni akasungirirwa pairi. Carbon dioxide inogadzirwa nemafuta anopisa ane kabhoni maatomu. Petroli, parafini uye diziri zvese zvine macaroni maatomu. Iyo molekyuru yemafuta saka inogadzirwa, pakati pezvimwe zvinhu, kabhoni maatomu uye, kana ichipiswa mumhepo (okisijeni, iri O2 gasi), CO2 inogadzirwa nemagetsi akazara uye kabhoni monoxide (CO) inogona kubuda nekukwana kusakwana. Iyo yekupedzisira dzimwe nguva yaiitika pamagetsi ekupisa mumba, zvichikonzera kudzingirira. Ikoko iwe unogona zvakare kuona iyo subliminal kubatana pakati peitrogen uye CO2. Chemical uye mune chaiye nyika, vaviri ava havana zvachose chekuita nemumwe.
Kana varimi vachifanira kuderedza nitrogen, ivo vanofanirwa kuderedza chimwe chinhu chisina kududzirwa zvakakwana. Izvi zvinodaro nekuti varimi havabudise nitrogen gasi. Nitrogen gasi ndiyo inowanzoshandiswa yakachena gasi uye inogadzira 78,1% yehuwandu hwehuwandu hwemhepo. Ziva kuti maatomu anogona chete kuwanikwa mune zvakasikwa zvine chekuita nemamwe maatomu. Kungofanana neatomu yeokisijeni (O) chete kana, semuenzaniso, gasi reokisijeni (O2) kana mumvura pakaitika (H2O). Nitrogen inobatanidza inogara ichichinjana pakati pemhepo nemweya zvipenyu. Nitrogen inofanira kutanga yagadziriswa kana "kugadzirwa" kuva fomu inodyarwa-inoshanda, kazhinji iammonia. Amoniya ndiyo inogadzirwa nevarimi (kanenge mombe dzavo). Amoniya inobatsira uye inobatsira kune zvinomera, ndosaka varimi vachiparadzira feteraiza pamusoro penyika yavo.
Kana ammonia ichipinda mukati mezvirimwa, zvinoshandiswa kugadzira mapuroteni. Zvirimwa izvi zvinobva zvagayirwa nemhuka dzinoshandisa maantiganisi kuumba mapuroteni avo uye tsvina ineitrogen (ammonia). Pakupedzisira, izvi zvisikwa zvinofa uye kuora, zvinopinda mubhakitiriya uye zvakasarudzika oxidation uye denitrization, zvichisunungura emahara nitrogen gasi (N2) mumhepo mumhepo. Kutenderera kunoshamisa uye kunodiwa.
Kungofanana ne CO2, hapana chaicho chine chepfu kana chine ngozi nezve nitrogen gasi. Muchokwadi, gasi re nitrogen i gasi 'inert' iro neakasikwa haripindiri kupinda mukuita kwemakemikari nezvimwe zvinhu. Naizvozvo hazvikuvadze, zvisiri-zvine chepfu, zvisina pundutso uye tinozvifema muzuva rese; kunge okisijeni. Iyo oksijeni iyo inogadzirwa zvakare nemiti semugumisiro wekupinza kwe CO2. Ose maviri CO2 uye nitrogen gasi saka akanaka magasi uye akanaka zvematongerwo enyika, uye zvematongerwo enyika izvozvi (uye mapoka evatsigiri) vanoti ane ngozi. Tinodaro nekuti hurumende dzepasi rose dzakasiya masayendisiti kuti iite kuti nyaya yacho ithembeke, nepo pasina chirevo chakaberekerwa, chemakemikari kana chemuviri chinogona kupihwa. Mishumo yaizoratidza kuti yaive yakawanda CO2 mumhepo panguva dzinodziya Pasi, ratidza kuti CO2 mhedzisiro yechiitiko chezuva kwete chakonzera. Isu tiri zvapupu zvesaenzi mashiripiti kuunza nzira yepasirese mutero uye hurongwa uko mari yemunhu wese inogona kuteedzerwa (saka blockchain mari).
Kubva pa2015, varimi vanga vachiitirwa kuPAS (Nitrogen Approach Chirongwa). Isu tinoona kuratidzira kwemavhiki mashoma apfuura nekuda kwekuisirwa kwezvinodiwa izvo zvakaoma kana kuti zvisingaite, izvo zvinotungamira varimi vasina mari. Idi rokuti Mark Rutte akapedza zuva nezuro achiteerera varimi (vachitaura nemvere uye vobva vasaita chero chinhu) zvakangofanana nekubviswa kwegesi kweGroningen uye nekudengenyeka kwenyika kunoitika: Wese izvozvi uye wezvematongerwo enyika anoshanyira chidimbu chake chekubata. vanhu ngavapurire vaputi. Rutte anogona kuenda kumusangano wevarimi akadaro aine chivimbo, achiziva kuti dunhu reDutch rakadzika mari kwemakore muchirongwa che pawns mumabasa ose; network ye Inoffizieller Mitarbeiter sekudzora kupikiswa pawns mune yega chikamu munharaunda. Semutambi anogona kuzvidaidza kuti 'prime minister', haafanire kutya nekurohwa chaiko, nekuti varimi vanozoponeswa kusuwa kese vangangovewo pakati peboka iri uye vanoramba vakanyarara.
Nekuti haugone kuyera kubuda kwe nitrogen, kana iwe usina tsanangudzo yakajeka yekuti ndiani kana chii chiri kubuda nitrogen, une dambudziko. Semuenzaniso, mombe inoburitsa nitrogen gasi painopera here? Kwete, pane nitrogen yakakomba mumurini uye mukati poo, asi mombe haibudisi nitrogen gasi. Nitrogen gasi dzimwe nguva inoshandiswa nevarimi, semuenzaniso kudzivirira kukura kwehuswa kana kuchengeta michero, asi izvo hazvitauri zvakawanda uyezve ,zve, gasi re nitrogen harisi kukuvadza uye gasi rakanaka. Varimi nokudaro vaifanira kuwana chishandiso chekuverenga, icho nyika yavakatemera ivo zvavanoita kusvibisa nitrogen. Mukupedzisira inozova inenge amoniya uye saka nezve izvo zviri mumanyowa uye urini. Nitrogen inoramba iri izwi rakasarudzwa nekuda kwezvikonzero zvekuparadzira uye nezve subliminal hurongwa "kuti unokanganisa". Nei zvisiri ammonia kusvibiswa kutaurwa uye isu tinogara tichinzwa zita iro rinotiyeuchidza nezvekuzevha? Sezvakatsanangurwa: ndozvatinodaidza 'subliminal programming'.
Zvirongwa zvazvino kubva kune vatambi kusangana Iyo Hague ndeyekuti iyo yakanyanya kumhanya mumigwagwa inofanira kuderedzwa. Uye ipapo pakanga paine chimwe chinhu nezve kuvaka? Uchiri kuiwana here? Zviripachena kuti panofanirwa kunge paine varimi vashoma, nekuti isu tinoda kuve nekugona kuvaka dzimba zhinji pamwe nezvivakwa, uye nekukurumidza iro mumigwagwa rinofanira kudzikiswa, nekuti nyika inogona kushandisa mabhirioni mashoma mukuwedzera pane faindi dzemumigwagwa. Pfungwa dzese dzinoshayikwa munhaurwa yega yega uye zvinoita sekunge chinangwa. Iko kunongokandwa mukati nemazwi anobata chero chinhu kupfuura kunzwa kwegumbu (asi zvakadaro uchiri kuenda kumahombekombe). Izvo hazvichisiri nezve zvemukati uye zvemukati; zvese zviri munyika of media, zvematongerwo enyika uye zvematongerwo enyika zviri zvese gut kunzwa. Munguva iyi, pane chete maitiro uye izvo ndezvekuti munhu wese anofanira kuisa mari yakawanda mariri kana kungoita (sevarimi) anoenda kumabhanga.
Shell, iwe unoziva iyo kambani mune yedu mhuri yeumambo ine chikamu chakakosha (chakavanzika kumashure kwemarudzi ese ezvakanaka zvekuvakwa) yakatanga mu2009 nitrogen makompiyuta kuwedzera mafuta ayo. Izvo zvaizove kuita kuti injini dziburuke. Asi izvo, zvakapesana zvinoita kunge zvakadaro uye tinogona kutaura kuti dambudziko rakawedzerwa kumafuta nemakambani emafuta. Dambudziko iro hurumende yeRutte parizvino iri kuyedza kuunza mhinduro kuburikidza nekukasira kumhanyisa kumhanyisa kubva ku130 kuenda ku100 mumigwagwa. André L. Boehman (uyo anozove ari bogeyman), purofesa wesainzi, zvemainzi nesainzi kuPenn State University muNew York, akatoshuma mu2009 muNew York Times:
Nitrogen-mafuta akapfuma ave 'achishandiswa kwechinguva'. Akataura kuti izwi rekuti "nitrogen rakapfumiswa" rinoti hapana chinhu kune munhu wepakati asingazive nezve kemikari yekuwedzera. Chandinozvibvunza inyanzvi yemafuta ndeichi: "Sei vakawedzera imwe nitrogen, nekuti izvo zvinowanzo wedzera NOx kubuda?"
Kuwedzeredzwa kwemahydrogen-ane makomputa kune mafuta ndosaka chiri chikonzero. Mhinduro yacho saka inofanirwa kuwanikwa ipapo: nevaya vanopa iwo mafuta; Munoziva kuti mabhiriyoni emadhora anomhanywa nemhuri iyoyo inogara mumizinda uye kune avo tinobhadhara mutero mukunyepedzera kunonzi democracy. Ingo bvisa iyo nitrogen yakakomba zvinowedzera!
Chiyero chega chega chatinoona vanhu vachibhururuka chakatenderedza uye chakangosarudzika pakufunga nhema dzinotsigirwa nenyanzvi dzakabirirwa naJeroben Pauw nemamwe maitiro ekuona kweTV. Iko hakuna kunyatsotsoropodzwa kana hwakajeka hwesainzi. Uye kana paine kutsoropodza, iyo censorship ichaona kuti vanhu havaione. Izvo zvese ndezve manzwa Mune kufunga kwangu, chinodiwa chetrojeni kuvarimi chinotenderera pamusoro pe landjepik, umo nyika inoda kuzviomesera varimi. Zvakanyanya kuoma zvekuti vamwe vanoenda vasina mari uye vavakidzani vevarimi vavo vanogona kutora nzvimbo uye imwe nzvimbo yepasirese inogona kuenda kuhurumende kumabasa ekuvaka pamwe nezvivakwa. Izvo chokwadi chekuti kukurumidza kwekumusoro kuri kudzikira pamwe kunozoguma nemabhiriyoni emadhora emadhora (kubva kune faini), kubva izvo zvivakwa zvitsva nezvirongwa zvekuvaka zvinogona kupihwa mari. Chokwadi chekuti varimi vashoma vari kupinda mubhodhoro chichaita chimiro. Varimi ava vanogona kudanana zvakanaka sevaranda pamwe nemuvakidzani wavo. Izvo hazvisi zvese nezve zvakatipoteredza; Izvo zvese nezvemari uye yakawanda mirairo (verenga: kutonga kwakawanda, mamwe mapurisa emapurisa). Iyo Netherlands senzvimbo yekuyedza yevamwe vese vekuEurope uye nenyika yese.
Lees rambai pano
Source chinyorwa listings: nytimes.com
Mamiriro ekunze anoratidza vadzidzi VaHaa vanoratidza zvakakwana
Robert Jensen naJensen.nl ye Infowars yekuchengetedza netsika yeNetherlands?
Tags: 100%, 130, Maitiro, amoniya, varimi, CO2, Featured, pamusoro-soro, ChiDutch, PAS, chirongwa, zvinopikisa, snelheid, migwagwa mikuru, nitrogen
Matthijs van den Brink akanyora kuti:
7 November 2019 pa 14: 13
"Heti yakakura zvakanaka uye yepepuru," varimi vakadaro, saka pakanga pasina (sezviri pachena) yakawandisa nitrogen. Izvo zvinoratidza kuti panogonawo kuve neitrogen yakawanda. Kana izvi zvakanyanya nekuda kwe acidization yevhu nekuda kwekunyanyisa ammonia? Uye kwete yakanyanya nitrogen? Asi zvakare zvakare kupararira kwemupfudze hakuna kunaka. Iwe saka hauna pundutso (kunyangwe kana izwi rekuti nitrogen risizvo)?
7 November 2019 pa 14: 23
Amoniya pachayo haina acidic, asi zvakakosha; i.ekuti irinarates iyo asidhi.
Izwi rekuti nitrogen rinotsanangurwa mune chinyorwa uye harinei nechekuita neizvo mhou dzive mune dzadzo kunze kwekuti iyo nitrogen atomu iri chikamu cheAmmonia. Amoniya inobatsira uye yakanaka kune izvo zvinomera.
Ehe unogona kutaura kuti zvese zvinoti 'zvakawandisa' hazvina kunaka, asi chirongwa chezvematongerwo enyika chinoita sekutenderedza mari uye umiriri hwepasi (kana kuzvitora), nezvinodiwa izvi zvakatipoteredza seane alibi
7 November 2019 pa 14: 31
Iyo nyaya ndeyekuti Netherlands ine yakawanda mombe uye saka zvakare yakawanda manyowa uye emmonia emissions. Kana izvi zvikagara pavhu saka zvidyarwa zvinoda ivhu rakashata - uye zvisingakwanise kuita nitrogen yakawanda - zvinotambura kubva pazviri. Zvirimwa zvinokura muvhu zvine hupfumi hwe nitrogen, souswa uye neruware, zvinowana ruoko rwekumusoro.
Ndiyo hurukuro yepamutemo ... inoyeuchidza nezve "acid mvura" Hype yemakore mashoma apfuura. "Zvirimwa zvinoda ivhu rakashata ...", "zvinomera zvirimwa" .. hongu hongu .. Uyezve tinoona izwi rekuti nitrogen uye nitrogen-hupfumi hwevhu. Izwi rekuti nitrogen rinoramba risina mhosva. Nitrogen chete inoitika mumakomisheni sezvakataurwa mumufananidzo muchinyorwa.
Ini ndoti: zvese ndezvemari, yakawanda mirau uye kubatwa kwemunda
7 November 2019 pa 15: 26
Saka kuverenga kuri pamutemo ndekwekuti ammonia inogona kuve yakashata kune zvimwe zvidyarwa mune mamwe maitiro ezviumbwa.
Izvo zvichave pasina mubvunzo kuti izvo zvakawandisa hazvina kunaka, asi zvese zvinoita sekufanana nekuparadzwa kwekuchengetwa kwemhuka muNetherlands. Iyo nharaunda seye alibi yekuwana yakawanda mari kure nehuwandu.
Izvo zvinogona kuve zvishoma zvishoma, asi zvinoratidzika kunge zviri kunyanya pamusoro pekuunzwa uye pekugara kune huwandu hwehutongi hwekutarisira mafambiro uye nezvemari.
Isu takaona zvakare inozivikanwa nzira ye 'masayendisiti anopesana nehurukuro yepamutemo vanowana kukwidziridzwa uye vamwe vanotsigira nyaya vanowana kukwidziridzwa' pane CO2 nyaya. Mubvunzo ndewekuti izvi ndozvazvowo here pano.
7 November 2019 pa 15: 52
Kuisa kuderedzwa kweammoina emissions inhanho diki yekudzikisa kunwa nyama. Munotarisa sei kuti vanhu vanotenga uye vanodya nyama yakawanda sei? Via 'iyo internet yezvinhu' (5G) uye inodhakwa kushandiswa. Izvo zvinoda blockchain-yakavakirwa mari system uye zvinhu zvakaita smart metres mumba (firiji kuyera izvo zvinopinda, smart chimbuzi kuyera icho chinobuda).
Iyo "nitrogen" alibi, pamwe chete ne CO2 hype, saka ndiyo nzira yakanaka yekuisa masimba ehutongi.
7 November 2019 pa 19: 34
Uye kana murimi obva auya nemhinduro, saka izvo zvinomiswa zvine musoro, nekuti hazvienderane nepasi rose 2030 ajenda. Kudzivirira kusununguka uye kupinda masango semuranda ..
7 November 2019 pa 20: 04
Mhinduro yakanaka. Ini ndakambotanga bhizinesi rakazara muZeolites uye ndiye akatanga kuunza zvinhu kuEurope kubva kumigodhi kubva kuTurkey neAustralia. Nehurombo, pane imwe nguva mutengi mukuru haana kubhadhara mabhiri, saka ini handina kukwanisa kuchengetedza kambani. Iye muridzi mutsva akazvitenga kubva kubhuroka ane zvinyorwa zvese zvakanyorwa neni panguva iyoyo zvichiri pawebsite. Zvakanakisa izvozvi wave mamirioni ndokunditenda nebasa rese nekufona.
Zeolite, uye kunyanya Clinoptilolite, mafirita ammonia kubva pamadonhwe uye inogadziridzwa zvakare kuburikidza nekushambidza munyu. Clinoptilolite iyo yandakapa yakagamuchirwawo neEU sechikafu chekuwedzera. Ini ndanga ndiri wekutanga kuendesa izvi kumabhiza mapurazi uye hombe (yakasununguka-inomhanya) huku dzehuku.
Imwe mhinduro inoshanda. Asi vanhu havadi mhinduro, ivo vanoda kuputsa indasitiri uye vabate zvirinani.
7 November 2019 pa 23: 07
Martin tsananguro yako inotsanangura zvakawanda, zvese zviri kuMadurodam nenzvimbo dzakatenderedza inoiswa pasi penyonganiso yeLuciferian.
7 November 2019 pa 21: 14
Cherechedzawo kuti boom yakatanga ne "nitrogen kutonga" kubva kukanzuru yenyika.
Iyo kirabhu iyo Willen-Alexander ari mukuru wayo.
Saka zviri pachena kuti nyaya iyi inovapo.
8 November 2019 pa 12: 17
Chese chinhu, kunyanya zvinhu izvo zvakakosha kune vakomana mune script, zvinotungamirwa kune kukwana. Izvo hazvina musoro kuti vaende kudare 'kumatare' avo.
Ini handinzwisise kuti varimi, iyo nyika yekuvaka, nezvimwe hazvishande pamwe? Njodzi inoramba iripo yekuti masangano anoda chimwe chinhu chakadzika, zvakadzika, akaiswa mukati mevazhinji undercovers. Inyika yakadii. Sezvineiwo isu tinogara mu 'mutemo wemutemo'.
7 November 2019 pa 23: 31
Uye pepanhau rakakura kwazvo muNetherlands iye zvino rinogona kutanga kuita kukuvara kwekudzivirira, izvozvi zvave kubuda pachena (nekuti kuyera kuri kuziva, data hombe) kuti vanhu havasi kutora
(yakasununguka kuverenga muInconcito mode, asi zviri nani kuti uone izvo zvisina musoro)
Vanhu vanoramba vachitaura nezve nitrogen, asi hazvisi nezve nitrogen. Iro izita rekuparadzira, kupa pfungwa yekuti uri kudzingirira!
« Gweta raShot, Philippe Schol nemubiribiri wembavha anonzi Schiphol
Ungamanikidza sei hurumende kuti dzichinje asi uchiramba vanhu? »
Total Visits: 13.750.649
Iyo korona chapupu uye mutambo pakati penyika uye proxy mhosva (Gweta Meijering dhidi Plasman)
Ungamanikidza sei hurumende kuti dzichinje asi uchiramba vanhu?
Gweta raShot, Philippe Schol nemubiribiri wembavha anonzi Schiphol
Martin Vrijland op Iyo korona chapupu uye mutambo pakati penyika uye proxy mhosva (Gweta Meijering dhidi Plasman)
Sunshine op Iyo korona chapupu uye mutambo pakati penyika uye proxy mhosva (Gweta Meijering dhidi Plasman)
Wilfred Bakker op Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
Itai 1.681 vamwe vanyori